Ku Baro Ingiriis ama Faransiis Kanada - Dugsiga Luqadda BLI ee Kanada
Barnaamijka Laba Luuqadood
Ingiriis iyo Faransiis
Dadka waaweyn & Dhalinyarada waaweyn
Diyaarinta Imtixaanka TEFAQ
Dhalinyarada & caruurta
Barnaamijka Dugsiga Hoose & Sare
GIM -ga Cegep
Xarafka Institut Grasset
Dugsiga Toronto Film
Jaamacadda Amiir Edward Island (UPEI)
Jaamacadda Saint Michael's College
Machadka Maaraynta Manhattan (MIM)
Koorsooyinka gaarka loo leeyahay
Tijaabooyinka rasmiga ah
TEF Canada iyo TEFAQ
Maalinta ugu horeysa ee fasalada
Hawlaha iskuulka kadib
Barnaamijyada bilowga ah
FLAP | Deegaanka xagaaga
Kaamka luqadda ee internetka
Miyaad Laba Luuqad Leedahay?Baro Ingiriisiga ama Faransiiska
Baro Ingiriisiga ama Faransiiska gudaha Kanada oo noqo qayb ka mid ah qoyska BLI.
Waxaan ka caawinay kumanaan arday inay bartaan Ingiriiska iyo Faransiiska gudaha Kanada.
Baro Ingiriisiga ama Faransiiska gudaha KanadaHadda buug - Wax ka baro
Haddii aad had iyo jeer ku riyootay inaad wax ku barato dibedda, tani waa daqiiqad ku habboon in la sameeyo.
BLI Kanada waxay soo bandhigaysaa qiimo dhimisyo la yaab leh oo aad uga faa'iideysan karto
haddii aad rabto inaad ku barato Ingiriiska ama faransiiska gudaha Kanada!
Ballanso koorsadaada hadda oo ka bilow taariikhda mustaqbalka, markii wax waliba caadi ku soo noqdaan.
Ma dooneysaa inaad wax ka barato raaxada gurigaaga?Koorsooyinka Ingiriisiga iyo Faransiiska Online
Dhammaan barnaamijyada waa la heli karaa
Ku barto Ingiriis ama Faransiis Kanada xitaa haddii aadan halkaan joogi karin.
Qaado koorsooyinka khadka tooska ah ee Ingiriisiga ama Faransiiska ee macallimiintayada Kanada ku saleysan
fasalka fasalka dhaqamada kaladuwan ee dhaqamada kala duwan iyo wanaajinta xirfadahaaga luqadda
Waad ka dooran kartaa labadan xulasho:
Bilow barashada Ingiriisiga ama Faransiiska khadka internetka oo ku dhammee barnaamijkaaga Kanada
ama u gudub xulashada tooska ah ee internetka.
Baro Heerkaaga IngiriisigaFree
Ama haddii aad rabto inaad ku barato Ingiriisiga Kanada laakiin aadan ogeyn inta ay kugu qaadanayso
inaad baratid ama baratid luqadda, ama haddii si fudud uun aad wax uga ogaatid heerkaaga Ingiriisiga,
Waad qaadan kartaa imtixaanka heerka Ingiriisiga Bilaashka ah oo aad maanta ogaan kartaa.
Qaado heer imtixaan
Miyaad dooneysaa inaad ogaato heerka heerka Faransiiska?Free
Soo ogow waxa heerkaagu yahay Faransiis adiga oo qaadanaya imtixaanka Heerka Bilaashka ah.
Ama haddii aad rabto inaad ku barato Faransiis Kanada laakiin aadan ogeyn inta ay kugu qaadanayso
inaad baratid ama baratid luqadda, ama haddii si fudud uun aad wax uga ogaatid heerka Faransiiska,
Waad qaadan kartaa imtixaanka heerka Faransiiska ee Bilaashka ah waxaadna ogaan kartaa maanta.
Barashada tooska ah ee Ingiriisiga iyo IngiriisigaBaro Ingiriisiga ama Faransiiska ONLINE
Isdiiwaangeli maanta iyo
ka hel 50%
Ka baro Ingiriisiga ama Faransiis raaxada gurigaaga. Haddii ay ku saameysay xaaladda adduunka ee hadda jirta, waxaad ku bilaabi kartaa barnaamijkaaga gurigaaga oo ku dhammayn kartaa Kanada markii wax walba caadi ku soo noqdaan.
Haddii aadan haysan wax qorshe ah inaad Kanada timaaddo mustaqbalka, waad ka faa'iideysan kartaa sidoo kale.
Waxbarashada OnlinekaKOOXAHA IYO ONLINE
Dugsiyada Luuqadaha ee KanadaBaro Ingiriisiga ama Faransiiska gudaha Kanada
Haddii aad raadineyso dugsiga ugu fiican oo aad ku barato Ingiriiska ama Faransiiska gudaha Kanada, waxaad ku jirtaa meesha saxda ah.
BLI Canada waxay leedahay barnaamijka aad raadineyso. Waxaan ku bixinaa koorsooyin Ingiriis iyo Faransiis ah Montreal iyo Quebec City qof walba. Si kasta oo ujeedkaagu yahay, BLI waxaan kaa caawin doonaa inaad ku guuleysato.
BLI waxay damaanad qaadeysaa inaad heli doonto natiijooyinka aad raadineyso. Waxaan kaa caawin doonaa inaad ku guuleysato yoolalkaaga iyadoo aan loo eegin ujeeddooyinkaaga. Haddii ujeeddadaadu tahay inaad barato Ingiriis ama Faransiis guud ahaan, tacliimeed, ganacsi, ama ujeedooyin imtixaan, waxaan kaa caawin doonaa inaad halkaas gaarto.
Waxaan haynaa koorsooyin fara badan oo kala duwan oo heerar kala duwan leh habab kala duwan. Haddii aad tahay bilow ama arday sare oo raba in uu ku fiicnaado xirfadahaaga luqadeed ee meel gaar ah, macallimiinteena ayaa kugu taageeri doona tacliintaan waxbarasho.
Waxaan kuu haynaa barnaamijka saxda ahBarnaamijyada Ikhtiyaariyada ah
Koorsooyinka Ingiriisiga ee Montreal ama Khadka tooska ah. Baro Ingiriisiga oo horumariya afarta xirfadood ee ugu muhiimsan ee luqadda: hadalka, akhriska, dhagaysiga iyo qorista iyadoo la adeegsanayo saxda ah ee qaabdhismeedka naxwaha, kalmadaha, iyo codadka.
Koorsooyinka Faransiiska ee Montreal, Quebec City ama Online. U diyaari naftaada inaad ula xiriirto si kadis ah oo dabiici ah oo aad barato sida loogu muujiyo fikradahaaga iyo fikradahaaga si hufan oo sax ah xaaladaha kala duwan.
LUUQADA LUUQADAHA EE LANGUAGE
Baro Ingiriisiga ama Faransiiska khadka tooska ah. Fasallada Online-ka ah ee loo yaqaan 'BLI Online' waxaa si toos ah u baraya macallimiinteena joogtada ah, iyagoo diiradda saaraya xirfadaha wada xiriirka. Fasallada waxaa lagu martigaliyay barteenna waxbarasho.
Koorsadeena diyaarinta IELTS ayaa ku siin doonta hordhac qaab dhismeedka imtixaanka IELTS oo ay weheliso
Kooraska diyaarinta BLI TEFaQ wuxuu diirada saarayaa inuu kaa caawiyo hormarinta xirfadaha aad ugu baahan tahay inaad ku guuleysato buugaagta hadalka iyo dhageysiga ee imtixaanka TEFaQ.
Barnaamijka Ingiriisiga Ganacsiga ee BLI wuxuu ku bari doonaa xirfadaha kugu jihaysan shaqada. Dhamaadka barnaamijka
Barnaamijka BLI ee Ganacsiga Faransiiska wuxuu ku bari doonaa xirfadaha kugu jihaysan shaqada. Dhamaadka barnaamijka
Haddii aadan haysan waqti aad ku gasho jadwalka waqtiga buuxa, waxaad iska qori kartaa mid ka mid ah koorsooyinka Ingiriisiga iyo Faransiiska ee lagu bixiyo fiidkii isla markaana aad bilawdo wanaajinta xirfadahaaga luqadeed maanta.
Barnaamijyada kaamamka jiilaalka ee BLI FLAP waxay bixiyaan khibrad cajiib ah oo dibedda ah iyagoo isku daraya barashada Ingiriisiga iyo Faransiiska oo leh nashaadaadyo kala duwan oo xiiso leh jawi aamin ah oo daryeel leh.
Koorsooyinka laba-luqadeedlaha ah
Barnaamijka laba-luqadeedka BLI wuxuu ku siinayaa fursad aad ku barato, ku-eegto oo aad ku barato dhammaan dhinacyada barashada luqadda, oo daboolaya dhammaan afarta
Barnaamijkeena oo loo dhan yahay wuxuu ku siinayaa khibrad gaar ah, oo kuu oggolaaneysa inaad sare u qaaddo xirfadahaaga luqadeed ee Ingiriisiga ama Faransiiska.
Jadwalkayaga dhammaadka usbuuca waxaa loo qaabeeyey inuu ku habboon yahay hab-nololeedkaaga mashquulka ah iyo baahiyahaaga.
Barnaamijyada kooxda BLI waxay bixiyaan khibrad cajiib ah oo dibedda ah iyagoo ku daraya barashada Ingiriisiga iyo Faransiiska oo leh nashaadaad kala duwan oo xiiso leh jawi aamin ah oo daryeel leh.
UBADKAAGA CANADABarnaamijyada Wadada
Miyaad jeceshahay inaad wax ku barato Kanada xarun dugsi sare ka dib oo markaa natiijada noqoshada Degganeyaasha Kanada?
BLI waxay hawshan ka dhigeysaa mid aad u fudud. BLI Kanada waxay heshiis la leedahay tiro badan ama machadyo bixiya waxbarashada dugsiga sare kadib. Haddii aad qaadato barnaamijka wadada 'BLI', waxaad heli doontaa tababbarka aad u baahan tahay si aad u gaarto heerka luqadda saxda ah ee lagama maarmaanka u ah inaad bilowdo barnaamij sidan oo kale ah, laakiin tan ugu muhiimsan, waxaad isu diyaarin doontaa inaad ku guuleysato marka aad bilowdo waxbarashadaada dugsiga sare.
Qaadashada barnaamijka marinka wadada BLI wuxuu kaa caawin doonaa inaad horumariso aqoontaada aqriska iyo qoraalka. Intaa waxaa sii dheer, waxaad baran doontaa farsamooyinka cilmi-baarista iyo wada-hadalka oo faa iido kuu yeelan doona isla marka aad waxbarashadaada ka bilowdo mid ka mid ah iskuuladeena iskaashiga.
IskuulkeenaLABA LAMBALYADA AAMIIN
Baro Ingiriisiga ama Faransiiska gudaha Kanada. Hadaad rabto inaad barato Faransiiska waxaad dooran kartaa inta udhaxeysa iskuulkayaga iskuulada ku yaal Montreal iyo iskuulada faransiiska ee ku yaalo magaalada Quebec. Haddii aad rabto inaad barato Ingiriisiga, BLI Montreal ayaa ku sugaya adiga
Ma haysaa wax su'aalo ah
ku saabsan BLI?
Isniinta - Jimcaha: 8:30 AM - 5 PM
Imtixaanka Meeleynta Ingiriisiga
Imtixaanka Meelaynta Faransiiska
Noqo qoys marti u ah
na raac on
BL 2020 BLi Kanada. Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay